Igwe kọfị dị ọnụ ala kacha mma nke 2022 - Ntuziaka ịzụrụ na onyinye
ndị na-eme kọfị dị ọnụ ala
Igwe kọfị kacha mma
Ụdị igwe kọfị
Igwe kọfị Capsule
Super akpaka igwe kọfị
Igwe kọfị Italiantali
ndị na-eme kọfị drip
ndị na-eme kọfị eletrik
ndị na-eme kọfị
Ndị na-eme kọfị Cona
Ndị na-eme kọfị arụrụ arụ
Igwe kọfị ụlọ ọrụ
ụdị ndị na-eme kọfị
kọfị na ngwa
Kọfị dị n'ime ala
barista kọfị ngwa
mmiri ara ehi frother
thermos maka kọfị
ihicha onye na-eme kọfị
mmiri ara ehi froth
Kwadebe cappuccino dị mma
Nri oyi ma ọ bụ kọfị ice
Jiri onye na-eme kọfị Ịtali nke ọma
Mee kọfị n'enweghị onye na-eme kọfị
ihe kọfị ịzụta
Ngwa na ihe ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ị na-amasị kọfị (na ndị ọzọ infusions) na ị na-eche echiche họrọ ezigbo kọfị nke na-egbo mkpa gị, ị ga-ama na ọ naghị adị mfe n'ihi ụdị dị iche iche dị na ahịa. Ma ọ bụrụ na ọ na-esiri ike ịhọrọ ụdị kọfị kọfị, ọ ka na-esiri ike ịnyagharịa n'etiti ọnụ ọgụgụ nke ụdị dị iche iche na ụdị dị iche iche.
Maka ndị ọrụ na-ekpebighị, na webụsaịtị a, anyị ga-agbalị ịkụziri gị ihe niile ịchọrọ ịma ka ị nwee ike ikpebi ụdị kọfị ị ga-achọ dị ka mmasị gị si dị, yana kwa, ụdị ụdị na ụdị akwadoro na nke ọ bụla. nke ị nwetara ngwaahịa kacha mma maka nke ọ bụla. Tụkwasị na nke a, nke a ga-egbochi gị imefu ego na oke, jide n'aka na ị na-akwụ ụgwọ dị mma maka ngwaahịa dị mma.
Igwe kọfị kacha mma n'ahịa
Ọ bụrụ na ịchọghị ịgbanye onwe gị nke ukwuu ma ọ bụ na ị nwere echiche ụfọdụ, ikekwe ị ga-achọ ịma nke kacha mma kọfị kọfị n'ebe ahụ ịhọrọ nke gị. Dị ka nchịkọta na-enweghị ịkpa ókè n'ụdị, nke a bụ n'elu igwe kọfị kacha amasị anyị:
NKWUO GBASARA YA
Ụtọ ụtọ n'elu
Ọnụ ego kacha elu
Bosch Tasimo Obi ụtọ...
Ụdị igwe kọfị: kedu ihe kacha mma?
Ọ bụghị naanị otu ụdị onye na-eme kọfị, ma ọ bụghị ya, nhọrọ ahụ ga-adị mfe karị. Enwere ọhụrụ igwe eletriki nke malitere inye nsonaazụ kacha mma na nkasi obi kachasị ukwuu, na-enweghị displacing kpamkpam ite kọfị omenala. N'ihi nke a, taa, e nwere ma igwe kọfị kpochapụwo maka ọtụtụ purists, yana ndị kachasị ọhụrụ.
Mara ha nke ọma dị ụdị igwe kọfị Ọ dị mkpa ịmara ka ị ga-esi họrọ onye na-eme kọfị kacha mma dabere n'ihe ị na-achọ. Anyị na-agwa gị n'okwu ole na ole ebe a:
na ndị na-eme kọfị eletrik bụ ndị niile ejirila usoro kpo oku eletrik dochie anya isi mmalite okpomọkụ iji kwadebe kọfị ma ọ bụ infusions. Ụdị kọfị a bụ ngwa ngwa na nke bara uru maka ọtụtụ ụlọ. Na mgbakwunye, ha adịghị mkpa ihicha ma ọ bụ nrụzi dị ka ihe na-agwụ ike dị ka omenala. N'ime otu a ị nwere ike ịhụ:
Igwe kọfị Capsule: ha bụ ndị na-emeri ugbu a, ebe ọ bụ na ha dị mfe iji na ngwa ngwa. Naanị họrọ capsule nke kọfị ma ọ bụ infusion nke ịchọrọ ịkwadebe (ụfọdụ na-enye gị ohere ịkwadebe ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ na oyi), tinye ya n'ime igwe, n'ime sekọnd ole na ole ị ga-edozi iko ma ọ bụ iko gị. Usoro nrụgide ya ga-agafe mmiri ọkụ site na capsule iji wepụ ekpomeekpo na ísì ụtọ nke ọdịnaya ahụ wee chụpụ ya n'ime iko / iko.
Super akpaka igwe kọfị: igwe ndị a na-enye gị ohere ịhọrọ kọfị kọfị ma ọ bụ kọfị ala (na-enye nnwere onwe ka ukwuu site na ịghara ịdabere na ụdị capsule na-akwado), ma ha anaghị achọ nlebara anya dị ka ndị gara aga. A na-akwụsịkarị ha n'oge kwesịrị ekwesị, na-enweghị ị ga-akwụsị ha n'onwe gị ekele maka usoro nke maara ihe ị ga-eme. Na mgbakwunye, ha na-enwekarị ọrụ mgbakwunye ndị ọzọ gbasara ndị gara aga.
Igwe espresso akwụkwọ ntuziaka: n'adịghị ka ndị na-ebu ibu-akpaka, ha enweghị grinder na usoro nke priming na ịpị kọfị ga-eji aka mee ya. Ụfọdụ nwere ngwa arụnyere n'ime ya ka vaporize, ya bụ, iji mee ka ị na-eme ka mmiri ara ehi na-eme ka ọ bụrụ na-akpaghị aka ma nye kọfị ahụ pụrụ iche nke ndị ọkachamara.
Ndị na-eme kọfị arụrụ arụ: ha na-abụkarị igwe kọfị na-akpaghị aka, ọ bụ naanị ha ka a na-arụ na kichin dị ka ngwa ndị ọzọ, dịka e nwere ike iji igwe na-asa ákwà, efere efere, oven, microwaves, wdg.
Drip ma ọ bụ ndị na-eme kọfị America: Ndị a bụ igwe kọfị eletrik na-ahụkarị nke na-eji ihe nzacha nwere ike iwepụ na isi iyi ọkụ eletrik. Ị nwere ike iji kọfị ala ọ bụla masịrị gị. Igwe ahụ ga-agafe mmiri ọkụ site na kọfị ala ma na-enyocha ya ka ọ gbanye nsonaazụ ya n'ime ite agbakwunyere. N'okwu a, ha abụghị monodose. Ụfọdụ na-agụnye ite thermos, n'ihi ya, ha ga-eme ka kọfị na-ekpo ọkụ ruo awa ole na ole.
Ndị na-eme kọfị ọkụ Italiantali: dị ka n'ọdịdị na arụ ọrụ na igwe kọfị Italiantali ma ọ bụ ite Moka akwụkwọ ntuziaka, mana ejiri ọkụ eletrik kwadoro ya. Buru n'uche na ọtụtụ igwe kọfị Italiantali anaghị akwado ndị na-esi nri induction, ya mere ịdị adị nke ụdị eletrik ha.
ite kọfị omenala
Ha bụ ndị na-aga n'ihu na-adabere na isi iyi okpomọkụ dị n'èzí. E chepụtara ha ọtụtụ afọ gara aga ma ka dị taa. Ọtụtụ ndị na-ahụ kọfị na-ahọrọ ịnọgide na-akwadebe kọfị ha n'ụdị kọfị kọfị a, na-achịkwa nkọwa ọ bụla site na mmalite ma na-eme "ememme" dum ruo mgbe ha nwetara kọfị zuru oke. Nke ahụ pụtara na ha anaghị adị ngwa ngwa ma chọọ usoro ntuziaka, yabụ na ha abụghị maka onye ọ bụla. N'ime ha, ị nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti:
Igwe kọfị Italiantali: ha bụ igwe kọfị dị mfe nke nwere tank mmiri na mpaghara ala. Nkwụnye ego a bụ nke a na-etinye na efere ahụ iji kpoo ya ma mee ka mmiri sie ike. Ya mere, ọ na-arịgo a conduit na-agafe na nzacha ebe a na-achọta kọfị ala. Ọ na-amịpụta ísì ya ma gbagogoro agbago n'otu tank dị n'elu.
ndị na-eme kọfị: Na plunger kọfị onye na-eme ka ọ na-ekwe ka kọfị na ihe ọ bụla ọzọ infusion. Ị ga-ekpocha mmiri ahụ ka ọ bụrụ obụpde na ngwa ndakwa nri ma ọ bụ n'ime ite, wee tinye ya n'ime onye na-emepụta kọfị yana ihe ị chọrọ inye. Ị na-emechi mkpuchi na ịkwanye plunger ka mmiri ụtọ na-agafe na nzacha gị wee si otú ahụ pụọ na mgbanaka dị n'okpuru.
Cona ma ọ bụ ndị na-eme kọfị na-ekpo ọkụ: Ọ bụ ụdị kọfị pụrụ iche nke e chepụtara ọtụtụ afọ gara aga. Ọrụ ya bụ, n'otu akụkụ, yiri ụkpụrụ Ịtali. Onye na-eme kọfị a na-eji ihe na-ekpo ọkụ dị n'èzí, dị ka ọkụ ma ọ bụ ọkụ na-esi ísì mmiri n'ime obere akpa ya, nke na-eme ka gas gbasaa ma mee ka ọ rịgoro n'elu ebe site na eriri nke jikọtara akụkụ abụọ ahụ. Ọ bụ ebe ahụ ka kọfị a ga-etinye dị. Mgbe a na-ewepụ ya na okpomọkụ, ikuku dị na mpaghara mpaghara dị ala na-eme nkwekọrịta ma na-emepụta mmetụta na-ekpo ọkụ, na-aṅụ kọfị site na mpaghara elu site na nzacha. Nsonaazụ ikpeazụ ga-abụ kọfị dị njikere ịṅụ ihe ọṅụṅụ na ala, na-ahapụ ihe mgbakwasị n'elu.
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ kọfị igwe Ha bụ otu dị iche iche. N'ozuzu, ha nwere ike ịbanye n'ime ọkụ eletrik, ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ ọkụ eletrik. Mana ha dị ọnụ karịa igwe, nnukwu igwe nwere ikike dị elu. Nke a na-enye gị ohere ịme kọfị ngwa ngwa na ọbụna mee ọtụtụ kọfị n'otu oge n'ọnọdụ ụfọdụ. Ha dị mma maka azụmaahịa ọbịa dị ka cafes, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, wdg, n'agbanyeghị na e nwere ọtụtụ ndị na-azụta ha maka iji ụlọ.
ndị na-eme kọfị kacha ere
N'ịga n'ihu n'ihe ekwuru ugbu a, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha mma kọfị na ị nwere ike ịzụta afọ a na ọnụ ahịa kacha mma maka ego, ndị isi na ụdị nke ha dị ka ụdị ndị na-emepụta kọfị nke anyị akọwaworị:
De'Longhi kere otu n'ime igwe kọfị kacha mma maka Dolce Gusto capsules nke ị nwere ike ịchọta Site na ike nke 1500w na usoro kpo oku ngwa ngwa ka ị ghara ichere otu nkeji ka ị kwadebe kọfị kọfị mgbe ọ masịrị gị. Site na nrụgide 15 ya, ị nwere ike wepụ ihe niile kacha mma na kọfị ma ọ bụ infusion capsule iji nye ụtọ kacha mma.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-ejikọta tank mmiri nke 0,8-liter, nke ga-enye gị ohere ịme ọtụtụ kọfị na-enweghị mejupụta ya. Ọ na-apụta maka ọrụ ndị na-adọrọ mmasị, dị ka kwadebe ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi, Nlekọta dị mfe karịa mgbe ọ bụla ekele anyị na-adọ aka ná ntị mgbe ọ bụ oge descale.
Onye na-emepụta kọfị nke Ịtali na-ahụ maka nhazi nke igwe a, na nkọwa nke igwe anaghị agba nchara na ọdịdị nke ga-achọ ebe ị na-etinye ngwaọrụ a. Ọ gụnyekwara eruba-nkwụsị ọrụ iji kwụsị jet na-akpaghị aka, tray mmiri na-edozi onwe ya maka ụdị iko na iko niile, nkwụsị akpaka mgbe nkeji 5 enweghị ọrụ, wdg.
Onye na-emepụta ihe a ma ama nke Krups kere ọzọ nke igwe kọfị kacha mma maka nespresso capsules nke ị nwere ike ịhụ na ahịa na ọnụ ala dị ọnụ ala. Nkasi obi kacha dị na igwe kọmpat na nke dị fechaa, nwere aka ergonomic yana agba mara mma.
Ọ nwere bọtịnụ iji gbanye ya, na naanị 25 sekọnd Ọ ga-adị njikere na mmiri na okpomọkụ kwesịrị ekwesị iji kwadebe kọfị dị mma. Ha niile nwere tank ikike nke 0.7 lita, yana ngbanwe nha iko ya na bọtịnụ ya (Espresso na Lungo), maka mkpụmkpụ ma ọ bụ ogologo.
Ike ya na nrụgide ya 19 nkp Ha na-ekwe nkwa na ị nwere ike wepụ ihe niile na-esi ísì ụtọ nke ala kọfị kọfị na capsules, yana ihe ndị a na-atụ anya site na iko kọfị dị mma. Nrụgide nke nwere obere anyaụfụ maka igwe kọfị ọkachamara.
Na mgbakwunye, o nwere usoro mgbochi ntapu, na sistemu nkwụsị akpaka ọ bụrụ na ị hapụ ya na-ejighi ya ihe karịrị 9 min.
Krups Nespresso Inissia…
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndị Tassimo capsules, Onye nrụpụta Bosch na-enyekwa igwe kọfị capsule kacha mma maka ụlọ ọrụ a na-eri nri. 1400w nke ike, tank 0.7 lita, yana kọmpat ma mara mma na-akwado igwe a iji tinye.
Na ya ị nwere ike ịnụ ụtọ ụtọ nke nhọrọ nke ihe ọṅụṅụ karịrị 40 na-ekpo ọkụ na ekpomeekpo mbụ niile. Enweghị ntọala mgbagwoju anya, naanị họrọ capsule ịchọrọ, pịa bọtịnụ ma chere ka iko ma ọ bụ iko gị dị njikere (yana nkwado nwere ike ịgbanwe maka nha dị iche iche).
Na idobe ihe onye na-eme kọfị dị ọcha nakwa na ihe ndị na-esi ísì ụtọ adịghị ejikọta, mgbe nke ọ bụla na-eji kọfị eme ihe, ọ na-enwe usoro nhicha uzuoku na-arụ ọrụ iji hapụ ya ozugbo iji kwadebe ihe ọṅụṅụ dị iche iche.
Ọzọ n'ime nnukwu ụdị European bụ Philips. Oge a o nwere ihe nlereanya nke onye na-eme kọfị maka mmetụta capsules na ị ga-amasị Dị na ihe ọhụrụ imewe na n'ọtụtụ agba ịhọrọ nke kacha dabara dị ka mmasị gị.
Ọ bụ onye na-eme kọfị pụrụ iche, ebe ọ bụ na ọ bụ ezie na ọ bụ otu dose ọ na-enye gị ohere ịkwadebe iko kọfị abụọ n'otu oge. Ihe niile ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-ahọrọ ike nke ogologo, dị nro, obere na kọfị siri ike nke ịchọrọ n'oge ọ bụla ma na-echere nsonaazụ ozugbo.
La Teknụzụ nkwalite kọfị na-agba mbọ wepụta ekpomeekpo niile nke capsule ọ bụla na nrụgide ya, na-ekwe nkwa ekpomeekpo ka mma. Tụkwasị na nke ahụ, nkà na ụzụ Crema Plus na-eme ka o doo anya na oyi akwa crem dị mma ma nwee ọdịdị dị mma karịa na igwe kọfị eletrik ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ijighị ya, teknụzụ nchekwa ike ya ga-agbanyụ ya ozugbo n'ime nkeji iri atọ.
Oroley iko iri na abuo
Oroley Ọ bụ otu n'ime ụdị kachasị mma ị nwere ike ịzụta ụdị a ndị na-eme kọfị Italy. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ iji ụdị kọfị ọdịnala a kwadebe kọfị n'ihi na ha na-ekwu na ụtọ ya na-amasị ha karịa. Ha bụkwa inogide na ọnụ ala.
Bụ mere nke aluminom, ma dabara adaba maka ụdị kichin ọ bụla, ewezuga induction. Igwe mmiri ya nwere ikike nke iko iri na abụọ, n'agbanyeghị na enwere nha dị iche iche iji kpuchie mkpa dị iche iche. Ọ gụnyekwara valvụ nchekwa iji gbochie ihe mberede.
Ezi kpochapụwo iji kporie kọfị n'ụzọ ochie, na-ege ntị gurgling na iku ume ya. Enweghị ike ịpụ n'ụlọ gị na mgbakwunye na ịkwadebe kọfị dị ụtọ, Igwe kọfị Italiantali na-agbakwụnye mmetụ pụrụ iche nke ahụ agaghị aga n'ihu ma nye ọtụtụ àgwà na kichin gị.
Oroley - kọfị...
Ọ bụrụ na-amasị gị otu nnukwu akpaka kọfị, otu n'ime ihe kacha mma ị ga-ahụ bụ Ịtali De'Longhi Ecam Magnifica, na 15 mmanya mgbali, 1450w ike, mbughari 1.8 lita mmiri tank, LCD panel ele ozi, cappuccino usoro, mgbanwe kọfị dispenser maka dị iche iche nha, na akpaka ihicha.
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ otu n'ime igwe kọfị kachasị elu. Ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ọ na-eweta bụ ihe dị egwu na njedebe nke kọfị na-atọ ụtọ. kọfị n'ala ọhụrụ ekele ya akpaka grinder na elu na kacha larịị mgbe ọ na-abịa hazie kọfị gị.
Onye na-eme kọfị ụlọ a na-enye ihe nsonaazụ ọkachamara na ị ga-ahụ n'anya ma ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ ezigbo kọfị n'anya. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịkwadebe iko kọfị abụọ n'otu oge. Na site na ịghara ịdabere na capsules, ọ na-enye gị ohere ịhọrọ kọfị kachasị amasị gị.
Ụlọ ọrụ De'Longhi na-enyekwa ihe nlereanya ọzọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mma ogwe aka onye na-eme kọfị maka ulo. Site na onye na-eme kọfị a, ị ga-enweta kọfị na-atọ ụtọ n'ihi ike ọ na-enye 1350 W na nrụgide dị elu ya na-ekele maka mgbapụta omenala dị warara 15 cm.
Na-ejikọta sistemu Thermoblock iji kpoo mmiri ahụ ka ọ dị mma n'ime naanị 35 sekọnd. Ọ na-arụ ọrụ na kọfị ala ọ bụla yana pọd "Easy Serving Espresso", iji nye gị nnwere onwe ka ukwuu mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa ahụ. Ọzọkwa, ihe ọzọ dị mkpa bụ nke gị ogwe aka na 360º ntụgharị "capuccinatore" iji nweta ụfụfụ mmiri ara ehi kacha mma na cappuccinos dị ka a ga-asị na ị bụ ọkachamara barista.
A mma nzọ na otu n'ime uru kacha mma maka ego emebere maka ndị niile na-enwe mmasị na usoro ịkwadebe kọfị.
De'longi raara onwe ya nye -...
N'ime igwe kọfị akpaka kacha ere bụ nke Oster Prima Latte, ebe ọ bụ na ọ nwere a n'ụzọ ziri ezi gbanwee price maka ihe ọ na-enye n'ezie. nwere ike ịkwadebe cappuccinos na-atọ ụtọ, lattes, espressos, yana mmiri ara ehi na-esi ísì ụtọ iji nweta ezigbo ụfụfụ.
Ọ bụ igwe espresso akụkọ ifo, ọkacha mmasị nke ọtụtụ weebụsaịtị na kọfị ndị hụrụ maka ekpomeekpo ọ na-enye ya na ọnụ ahịa dị ala karịa igwe ndị ọzọ dị oke ọnụ.
O nwere tank mmiri 1.5 liter ike, na mmiri ara ehi ọzọ 300 ml ọzọ. Ọ nwere ike ikpo ọkụ ngwa ngwa n'ihi ike 1238 W ya.
Ndi nwere Nrụgide nke 19 nkp iji wepụ ihe kachasị na kọfị, na-enyekwa ọtụtụ ude na-esi na ya pụta. Na ọ dị nnọọ mfe ihicha, na ọbụna na-enye gị ohere iwepu mmiri ara ehi tank na-echekwa ya na ngwa nju oyi.
Enwere ụdị nke abụọ nke igwe, nke Oster Prima Latte II, na ike dị ukwuu na ikike, na ọ bụ ezie na purists ka na-ahọrọ nke mbụ, ọ ka bụ nzọ na-adọrọ mmasị.
Nke a Onye na-eme kọfị eletrik Cecotec Ọ bụ otu n'ime ihe na-adọrọ mmasị n'ime ụdị a. Onye na-emepụta rọbọt ụlọ a ma ama na-arụkwa igwe kọfị nwere nhazi mara mma, kọmpat, yana rụpụta ezigbo nsonaazụ ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ya.
Ọ nwere ike nke 1350w iji kpoo mmiri maka infusions, Thermoblock iji mee ka ọ dị ngwa ngwa, 20 nkp nke nrụgide iji nweta ude kacha mma na isi ísì kachasị dị ka igwe kọfị ọkachamara, ọ na-agụnye steamer na-edozi mmiri ara ehi ma nweta ụfụfụ kacha mma, ọ na-ekwe ka a na-ekpochapụ mmiri ọkụ iji kwadebe infusions, tank ikike 1.2-liter, na otu. usoro mgbochi ntapu.
Cecotec Express kọfị ...
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ahọrọ Ndị na-eme kọfị America ma ọ bụ ntapu, German Melitta bụ otu n'ime ihe kacha mma ị nwere ike ịzụta. Ọ bụ onye na-eme kọfị nzacha eletriki, nke nwere ike nke 1000w (klaasị A nke ọma), ikike nke lita 1.25, nke igwe anaghị agba nchara.
Kọfị kọfị dị ụtọ ma na-esi ísì ụtọ nke ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ ịhọrọ site na ya, yana thermos nke nwere ike idobe kọfị ọkụ maka awa 2 ekele maka mkpuchi isothermal nke ite ya. Ọ gụnyekwara mkpuchi, ihe nzacha mgbochi mgbochi, ndakọrịta maka nzacha 1 × 4, aka, mmemme descaling, mmezi isi ike mmiri, ma bụrụkwa igwe ịsa efere adịghị mma.
Nha Cona D-Genius
Ọ bụ ihe n'ezie Onye na-eme kọfị Cona, ma ọ bụ agụụ. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ yiri ya na ahịa na-agbalị iṅomi ya, ma nke a bụ nanị nke na-edobe mbụ imewe nke omenala kọfị kọfị, nakwa dị ka eziokwu, ebe ọ bụ na a ka na-emepụta site Cona siri ike.
Mere na Europe, na abụọ containers nke iko borosilicate na-eguzogide ọgwụ na-ekpo ọkụ na-eji usoro ziri ezi nke ga-ewepụ ihe niile na-esi ísì ụtọ na ihe ndị dị na kọfị na-ekele maka mmetụ nsị nke na-egosi ya.
Inwe onye na-eme kọfị Cona bụ azụmahịa siri ike, a dum ika style na àgwà. Ọ bụ ya mere anyị ji atụ aro ka ị gbanarị nṅomi wee chọọ Cona mbụ. Ọnụ ya dị elu, mana stampụ enweghị ike ime ya.
CONA 'Nha D-Genius...
Ọ bụrụ na-amasị gị iji ndị na-eme kọfị, Bodum bụ otu n'ime ihe kacha mma na ọnụ ala ị nwere ike ịzụta. Onye na-eme kọfị nwere iko borosilicate siri ike, ikike ịkwadebe iko 8 n'otu oge, yana plunger nwere nzacha agbakwunyere.
Kpoo mmiri ruo mgbe ọ na-esi ísì, gbakwunye kọfị ala ma ọ bụ infusion nke ịchọrọ ịkwadebe na kọfị kọfị, hapụ ya ka ọ gbanye ma pịa plunger yochaa ala niile ma hapụ ha ka tọrọ atọ n’azụ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta ihe ọṅụṅụ gị ozugbo.
Ụdị kọfị kọfị a ga-echetara ihe karịrị otu nne na nna ochie gị, ọ bụkwa ya nhọrọ dị ọnụ ala, enwere ike ijikwa, dị mfe ibufe na nke ahụ na-emekwa ka infusions dị iche iche.
Bodum 1913-01 Kọfị...
Lelit bụ otu n'ime ndị nrụpụta kacha ewu ewu maka igwe kọfị akpaka maka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na mfe ihicha igwe anaghị agba nchara, integrated kọfị bean grinder, nnukwu ikike 3.5 lita mmiri tank, 1200 W nke ike, na a elu nrụgide usoro.
Ọ nwere valvụ ụzọ atọ iji kpoo ntụ ntụ kọfị, otu ndi isi iji dozie otu kọfị n'otu oge, na kettle ọla. Ọ dakọtara na ma kọfị kọfị, kọfị ala, yana kọfị kọfị. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-agụnye usoro iji kpoo ọkụ na ịmepụta ezigbo ụfụfụ.
Dị ka ika n'onwe ya na-egosi, onye na-eme kọfị "naanị maka ndị hụrụ kọfị n'anya": ejiri ígwè mee kpamkpam, njedebe dị egwu na ọrụ ya dị elu nke ndị na-emepụta kọfị na-achọsi ike.
Otu esi ahọrọ onye na-eme kọfị: nchịkọta nzọụkwụ site na nzọụkwụ
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ihe mgbagwoju anya, anyị ga-agbalị ime ka usoro nke ịhọrọ nke onye na-eme kọfị ịzụta. Ihe mbụ ị kwesịrị iburu n'uche bụ ihe ị na-achọ ka ị mara ihe ị chọrọ. Ihe dị ka ihe doro anya, mana nke ahụ adịghị mfe na omume. chee echiche ugbu a họrọ ụdị ụgwọ ị chọrọ iji dozie ite kọfị gị n'ọdịnihu:
Naanị kọfị: Ị ga-ahọrọ n'etiti otu n'ime Nespresso, Senseo, Italian, integrable, ogwe aka, super-automatic, drip ma ọ bụ American, Cona, na ulo oru capsules (ma ọ bụrụ na ọ bụ maka azụmahịa). N'ime nke a, ị nwere ike belata ohere dịka ma ịchọrọ nkasi obi karịa ma ọ bụ obere:
Akpaaka: Nespresso capsules, Senseo, integrable, ogwe aka, ibu akpaaka.
Manual: ntapu ma ọ bụ American, Cona, ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Infusions ndị ọzọ (tii, chamomile, lemon balm, valerian, ...)Ị ga-ahọrọ n'etiti onye na-eme kọfị Dolce-Gusto, Tassimo ma ọ bụ plunger kọfị. Dị ka ọ dị na mbụ, ị nwere ike belata ohere ndị ọzọ karịa:
Akpaaka: site na Dolce-Gusto ma ọ bụ Tasimo capsules.
Manual: onye na-ebu.
Ozugbo ị doro anya maka ụdị igwe ma ọ bụ kọfị ị chọrọ dịka ihe ịchọrọ ịkwadebe, ị nwere ike ịhụ eserese na-esonụ iji chọpụta nke bụ ọdịiche nke ụdị ọ bụla nke onye na-eme kọfị, ma si otú mechaa họrọ maka otu kpọmkwem:
nke capsules: ngwa ngwa, dị mfe na bara uru.
Nespresso: ihe si na ya pụta bụ kọfị na-ekpo ọkụ nke ukwuu, na-enwe ezigbo ahụ na ísì ụtọ, yana nhazi ziri ezi. Capsules dị oke karịa ma e jiri ya tụnyere Dolce-Gusto ma ọ bụ Tassimo, ebe ọ bụ na ị na-ahụ naanị kọfị, nke dị iche iche, ma naanị nke ahụ.
Dolce GustoNjikọta: kọfị siri ike, ezigbo ísì, ezigbo ụfụfụ na udidi. Na ụdị capsules dị iche iche nke kọfị dị iche iche (espresso, ntụpọ, ịkpụ, decaffeinated, ...), yana tii mmiri ara ehi, tii oyi, na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ na oyi.
Tasimo: Ọ bụ ezie na àgwà adịghị elu dị ka abụọ gara aga, ọ na-enye nsonaazụ yiri ya. Na mgbakwunye, capsules ị nwere ike ịhụ dị iche iche, dị ka ọ dị na Dolce-Gusto. Site na kọfị dị iche iche ruo infusions na ihe ọṅụṅụ oriri ndị ọzọ ama ama. N'ihe karịrị ụdị 40 dị iche iche, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị dị iche iche karịa ihe niile.
Senseo: ọ na-eme dị ka ọ dị na Nespresso, a na-amachi ya karịa n'ihe dị iche iche. Kọfị na nke a àgwà dị ka nke Tassimo.
Superautomatic, ogwe aka ma ọ bụ mwekota: atọ ndị a nwere nha nha. Kọfị yiri ndị enwetara na ọkachamara ụlọ ọrụ kọfị igwe, na site na uru nke ogwe aka vaporizer iji mepụta ụfụfụ dị elu nke ị na-apụghị ime na capsules, ma ọ bụ na eletriki ma ọ bụ omenala ndị ọzọ.
eletrik ọzọ: maka American ma ọ bụ drip coffees, na mgbakwunye na ọ bụghị dị mfe na ngwa ngwa dị ka ndị gara aga, ihe si na kọfị pụta dị nnọọ ọcha, na-enye ohere dị iche iche na-esi ísì ụtọ na ụtọ. N'agbanyeghị nke a, ndị hụrụ ezigbo kọfị anaghị enwe ekele maka ha. Kama nke ahụ, ha nwere ike ịdị mma maka ndị na-achọ ihe dị ọnụ ala, na-enwere onwe ha iji kọfị ọ bụla, na ndị na-eme ka kọfị buru ibu n'otu oge ma na-adịghị arụ ọrụ.
omenala: usoro ahụ adịghị mma dị ka ọ dị na mbụ. Ị ga-eji aka mee usoro ahụ site na nzọụkwụ ruo mgbe ị nwetara nsonaazụ.
Italian: ha na-enye gị ohere ịkwadebe kọfị dị mma na-esi ísì ụtọ. Ha dịkwa ọnụ ala ma ọ bụghị mgbagwoju anya iji, ọ bụ ezie na usoro ahụ dị nwayọọ. Agbanyeghị, ọ na-enye gị ohere ịme ihe karịrị otu iko n'otu oge dabere na nha.
cone: ọ bụrụ na ha bụ ezigbo Cona, nsonaazụ ya dị ezigbo mma. Site n'itinye kọfị na obere okpomọkụ karịa ndị ọzọ (ihe dị ka 70ºC), nke a na-eme ka kọfị nọgide na-enwe organoleptic Njirimara karịa ụdị ndị ọzọ.
plunger: Ha nwere ike ịnye nsonaazụ yiri nke mbụ. Ihe kacha ike ha nwere bụ na ha dị ọnụ ala ma dị mma maka ndị agadi na-amaghị otú e si eji nke oge a eme ihe ma ọ bụ ndị na-achọghị ime ka ndụ ha sie ike.
Ọrụ: maka azụmahịa, na-enweta ekpomeekpo ọkachamara na textures n'ihi njirimara ha na-enye. Ha dị oke ọnụ ma buru ibu. Ụdị igwe espresso ndị a bụ akwụkwọ ntuziaka, ọ bụ ezie na e nwekwara ndị nwere nnukwu akpaaka.
Kedu kọfị ị ga-azụ?
Dabere n'ụdị kọfị ị na-eji, ị ga-achọ otu kọfị ma ọ bụ ọzọ. Ma eleghị anya, ọbụna onye na-emepụta kọfị gị na-akwado ọtụtụ ụdị kọfị. Nke ọ bụla n'ime ha nwere ya peculiarities na aghụghọ. Ị maara ole ụdị kọfị kọfị dị? Kedu ihe nzuzo ịhọrọ kacha mma ala kọfị? ma ọ bụrụ na ị zụrụ agwa kọfị, ka esi egweri ya nke ọma?
Ngwa kọfị: ihe ndị dị mkpa
Ụwa kọfị buru ibu ma ọ bụrụ na-amasị gị ihe ọṅụṅụ a, ị gaghị akwụsị iju gị anya site na ọnụ ọgụgụ nke nhọrọ dị maka. gbanwee ahụmịhe kọfị ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Nye ọtụtụ ndị ọ bụ ọbụna ememe. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ngwa ndị yiri ka ọ dị mkpa: mmiri ara ehi frother iji nweta mma na creaminess, kọfị grinders maka udidi zuru oke ma ọ bụ thermoses iji chekwaa ma bufee kọfị nke gị. Lelee.
1 Igwe kọfị kacha mma n'ahịa
2 Ụdị igwe kọfị: kedu ihe kacha mma?
2.1 ndị na-eme kọfị eletrik
2.2 ite kọfị omenala
2.3 Igwe kọfị ụlọ ọrụ
3 ndị na-eme kọfị kacha ere
3.5 Oroley iko iri na abuo
3.11 Nha Cona D-Genius
3.12 agba bodum
4 Otu esi ahọrọ onye na-eme kọfị: nchịkọta nzọụkwụ site na nzọụkwụ
5 Kedu kọfị ị ga-azụ?
6 Ngwa kọfị: ihe ndị dị mkpa
Igwe kọfị Cona na igwe kọfị na-ekpo ọkụ
Igwe kọfị Bialetti
Igwe kọfị Bosch
Ndị na-eme kọfị bra
Igwe kọfị Cecotec
Ndị na-eme kọfị DeLonghi
Ndị na-eme kọfị Delta
Igwe kọfị Dolce Gusto
Igwe kọfị na-adịghị mma
Ndị na-eme kọfị Jura
Igwe kọfị Krups
Igwe kọfị Lavazza
Igwe kọfị Melita
Ndị na-eme kọfị MiniMoka
Igwe kọfị Nespresso dị ọnụ ala
Igwe kọfị Orbegozo
Ndị na-eme kọfị Oroley
Ndị na-eme kọfị Oster
Igwe kọfị Philips
Igwe kọfị Saeco
Igwe kọfị Senseo
Igwe kọfị Smeg
Ndị na-eme kọfị Solac
Igwe kọfị Tasimo
Igwe kọfị Ufesa
Ụdị capsules kọfị
Igwe kọfị dị ọnụ ala 2022 - Iwu nzuzo - Contacto